Ogaden News Agency (ONA) – Dad Maxaabiis Ah oo Jidh Dil Loogu Dilay Itoobiya.
Dad Maxaabiis Ah oo Jidh Dil Loogu Dilay Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ December 25, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ciidanka wayaanuhu ay si xun ula dhaqmeen wadaad muslim ah oo mudo ugu maxaabiisnaa mid kamid ah guryaha ay ciqaabta shacabka ugu tala galeen.
Sida xogta aan ku helayno Xaaji Muuse oo ahaa maamulaha Iskuulka Al Diaa iyo qaar kamid ah macalimiinta Iskuulka iyo waliba ardaydiisa ay ciidanka gumaysigu xabsiga dhigeen kadib markay guryahooda kala baxeen xili la hurdo oo habeenimo ah, waxaana sida lasheegayo lageeyay mid kamid ah jeelasha ugu iqaabta badan.
Warka ayaa intaas kudaraya in ilaalada xabsigu ay Xaaji Muuse oo aad u jidh dilan ku dhaheen orod gurigaagii aad, waxaana lasheegayaa in Xaajiga loogaystay jidh-dil ay adag tahay in laga soo waaqsado, hase yeeshee Xaaji Muuse ayaa arinkaas gaashaanka udaruuray wuxuuna sheegay in loosheego sababta loosoo xidhay isla markaana in lasoo daayo macalimiinta iyo ardayda Iskuulka Al Diaa ee xidh xidhan.
Waxaa xusid mudan in ciidanka gumaysigu ay isla jeelkan kudileen Xaaji Muuse walaalkii Taha Maxamed Nuur oo sida lasheegay u geeriyooday jidh-dil ba’a oo ay ciidanka ilaalada jeelashu ugaysteen kadibna ay banaanka usoo tuureen maydkiisii.
Waxaa guud ahaan wadanka Itoobiya ka dhaqan galay ciqaabta dadka maxaabiista ah, waxaana la xasuusan yahay kuman yaal iyo kumanyaal shacab ah oo lagu xidhay jeelasha Itoobiya, isla markaana meel ay jaan iyo cidhib dhigeen lawaayay raq iyo ruux toona.
Dadka loogu ciqaabta badan yahay ayaa ah dadka Soomaalida Ogadenia ee lagumaysto kuwaas oo gumaad joogta ah lagu hayay tan iyo intii uu gumaysigu joogay ciida Ogadenia, waxaana ilaa iyo hada xabsiyada Ogadenia kujira dad aad ubadan oo shacab ah oo aan rajo nololeed lahayn.